Abalandeli be-Instagram Simahla T IINGcebiso ezi-5 ZESISEKO】 ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Abalandeli Instagram Simahla 【5 BASIC TIP】
Disemba 13, 2018 0 IiCententarios 1210
Fumana abalandeli Instagram simahla okanye abalandeli Isimahla kwi-Instagram ayinkimbinkimbi njengoko kubonakala ngathi. Kuyinyani ukuba ii-algorithms ezintsha zenethiwekhi yontlalontle zibangele ukuba inkqubo ibe nobunzima ngakumbi. Nangona kunjalo, sisenothotho lwamaqhinga kunye neendlela zokuphepha ukuba ungahambi uyokuthenga dinero abalandeli beprofayili yethu.
Kukho iindlela ezininzi zokufumana abalandeli mahala kwi-Instagram. Kuya kufuneka uzame nje ukuziqhelanisa kancinane kwaye ngokuthe rhoqo yonke imihla ukwandisa inani labalandeli abanomdla kumxholo wethu.
IiHashtags zinokuchazwa njengeyona ndlela ifanelekileyo yokumakisha iiposti zethu. Nangona kunjalo, kufuneka zisetyenziswe ngokuchanekileyo ukuze bazalisekise injongo yabo yokutsala abalandeli kwiprofayili yethu. Okokuqala, akufuneki sibaphathe gadalala kwaye sibeke phakathi kwe-10 - 12 kupapasho ngalunye.
Ukongeza, kuya kufuneka utshintshe ii-hashtag ngamaxesha athile ukufikelela inani elikhulu labasebenzisi. Ukuba sihlala siphinda okufanayo siya kuba sifikelela kwiqela elifanayo, ngoko ke kufuneka sigqume ii-horons ezintsha. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufumana abalandeli Instagram free.
Thumela umxholo womgangatho ongaphezulu
Kuyabonakala ukuba Umgangatho ophezulu esinawo kwiprofayile yethu, likhulu inani labalandeli Siya kuba. Ukuba sijonga ukuba iakhawunti ye-Instagram ayipapashanga kangangeenyanga ezininzi, kunokwenzeka ukuba inofinyezo oluphakathi phakathi kwabalandeli.
Ke ngoko, kungcono ukupapasha umxholo onomdla rhoqo, Ndikukhapha kunye nevidiyo ebukhoma, Amabali e-Instagram, izicatshulwa, njl. Njengoko silayisha umxholo kuya kubakho abalandeli abaninzi abanomdla kwinto esiyenzayo.
Thumela kwiqela le-Instagram ku-Facebook
Kwi-Facebook kukho iqela elininzi elijolise kwi-Instagram. Kuyacetyiswa kakhulu ukuba ujoyine elinye lala maqela ukudibana nabanye abalandeli abanomdla, imixholo kunye nezinto abanomdla abafana nazo. Ngale ndlela, siya kuba nakho ukufumana inani elifanelekileyo labalandeli abatsha be-Instagram kwiprofayile yethu.
Sebenzisa amabali e-Instagram
Amabali e-Instagram sisixhobo apho sinokufaka khona iifoto, iividiyo, ukongeza iifilitha, iiplagi, iziphumo kunye nezinye ukwenza ibali eliza kuhlala liprofayile yethu kwiiyure ze-24. Nangona kunjalo, kukho umsebenzi ngaphakathi kweakhawunti yethu, phantsi kwegama Amabali e-Instagram abonisiweyo, ukugcina la mabali kwaye ukuba bonke abalandeli banokubabona nangaliphi na ixesha.
Umxholo oLayishwe kwiimbali ze-Instagram uhlala uvuya, usondele kwaye uyonwabisa kakhulu. Ukuba siyaphumelela ukwenza njalo, abalandeli abaninzi baya kuba nomdla kwiprofayile yethu.
Siyakuxelela indlela yokwenza imali nge-Instagram ngokulula.
Nxibelelana nezinye iiprofayile ze-Instagram
Ngokuqhelekileyo, Sidla ngokudibana nezinye iiprofayili ezinabalandeli abaninzi kunathi. Sikholelwa ukuba ngale ndlela bayakusilandela kwaye siya kuba nempembelelo enkulu. Nangona kunjalo, kunokwenzeka kakhulu ukufezekisa le mpembelelo ngokunxibelelana namagqabantshintshi kunye nezinto azithandayo kwiiprofayili ezinabalandeli abambalwa kunathi.
Ukusuka kwezi ndlela siza kwandisa inani labalandeli kwi-Instagram. Isiphumo asiyi kukhawuleza, ngoko kuya kufuneka kwenziwe umsebenzi wexesha elithile kunye nezigulana. Ngexesha elithile lexesha siza kubona indlela inani lethu labalandeli be-Instagram elisimahla likhula ngayo. Ukuba sifuna ukukhula ngokukhawuleza, unga Thenga abalandeli be-Instagram.
2 Thumela umxholo womgangatho ongaphezulu
3 Thumela kwiqela le-Instagram ku-Facebook
4 Sebenzisa amabali e-Instagram
5 Nxibelelana nezinye iiprofayile ze-Instagram
Iinethiwekhi zentlalo kwiinkampani
Uyenza njani imali nge-Instagram? Abalandeli bayadingeka